ခင်မင်းဇော်: တို့တူတူ လက်ချင်းတွဲလို့လေ....
ငါနဲ့ ရာကျော်လည်း အဲလိုပဲ..။ ငါတို့ကတော့ ဘာဆိုင်မှ မထိုင်ဖြစ်ပေါင်ဟယ်... :(
လမ်းတော့ မကြာခဏ လျှောက်ဖြစ်ပါတယ်..။ အင်းး သေချာ အချိန်ပေးပြီးတော့ လျှောက်ဦးမှပါလေ..။
မတွေ့တာချင်းတော့ တူတယ် အစ်မရေ။ ကျွန်မတော့ ယောက်ျားနဲ့ ချတ်ဖို့ တခါမှ မစဉ်းစားမိဘူး။
နောက်ကနေ ကပ်လျှောက်ပြီး နှောက်ယှက်ချင်လို့ပါ :D
နောက်တာပါ .. အမဟာဖတ်ရတာ စိတ်ထဲမှာ ၀မ်းသာကြည်နူးစရာ :)
ကျမ တို့ကတော့.. တယောက်တခန်း သုံးပေမဲ့.. အော်ပဲ ပြောပါတယ်။း))
ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်ပြီး တကမ္ဘာလုံးက မိတ်ဆွေတွေနဲ့ စကားပြောနေရင်းက တအိမ်တည်းအတူနေသူချင်းက တဖြည်းဖြည်း
စိတ်အေး လက်အေး လမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ လိုနေပြီ...
ဟုတ်ပါ့ အစ်မရေ... ကိုယ့်ကွန်ပျုတာရှေ့ထိုင်ပြီး ဟေ့ ထမင်းစားတော့မလား... ကော်ဖီသောက်ဦးမလားလို့ အမျိုးသားကိုလှမ်းချက်... သူ အောက်မှာ ရှိနေရင်လည်း ကိုးရီးယားကားလာရင် လှမ်းပြောဦးနော်လို့ လှမ်းရိုက်... ကလေးတွေနဲ့ဆိုရင်လည်း are u still playing games! Stop and do your homework now! တို့...သူတို့ကလည်း ok mom! ပေါ့လေ...
တခါတလေ.. mom! pls send me banana tree or dog. (ဒါက ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ သားအမိတွေ တည့်လို့ပေါ့)
အစ်မရယ်..လမ်းလျှောက်လည်း စကားမပြောဖြစ်ပါဘူး.. အစ်မနဲ့ အစ်ကိုနဲ့ကိုတော့ အားကျတယ်..ကိုယ်ကသာ ပြောချင်တာတွေ ပြောနေတာ..သူကတော့ သူ့ဘာသာစဉ်းစားချင်တာတွေ စဉ်းစားနေတာပါပဲ.. အင်း..အစ်မလို ကိုယ့်အမျိုးသား စိတ်ဝင်စားမယ့် အကြောင်းမျိုး မပြောမိလို့ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့လေ..။
သမီးတို့လဲ အတူတူပဲ အန်တီရေ ဘေးချင်းကပ် ထိုင်နေရပြီးတော့ ချက်နဲ့ချိန်းတယ် ကျပ်သူကျပ်ကိုတော့ ညနေတိုင်း အချိန်ပေးပြီး လမ်းလျောက်တယ် သူက တစ်နေကုန်ထိုင်နေရတာ ချိပြိး လမ်းမလျောက်တတ် တော့မှာစိုးလို့တဲ့ အမြဲတမ်းကစားတယ် သမီးကတော့ တစ်ခါတစ်လေ လယ်ရိတ်ရင်းတန်းလန်းဆို ဘယ်တော့မှ မလိုက်ချင်ဘူး..အခုတော့ လမ်းလျောက်ထွက်တာကို လွမ်းတယ်..
လမ်းလျှောက်အစ်မရေ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ် .. တူးတော့ မြန်မာပြည်ပြင်ပ ရောက်ကတည်းက လမ်းမလျှောက်ဖြစ်တော့တာ (တူးရေးတဲ့ လမ်းလျှောက်ခြင်းအက်ဆေးထဲကလိုပေါ့ .. ရန်ကုန်မှာတော့ လမ်းနေ့တိုင်းလျှောက်နေရပေမယ့် တကူးတက လမ်းလျှောက်ဖြစ်သေးတယ် .. ခုတော့ အဲလိုဟုတ်ဘူး)
လမ်းတူတူ လိုက်လျှောက်မယ့်သူ မြန်မြန်လာပါ။
တို့လည်းပဲ အိမ်မှာရှိနေတုန်းဆို ဘာအကြောင်းမှမပြောဖြစ်။အလုပ်သွားမှ ဖုံးနဲ့လှမ်းပြီးစကားစမြည်ပြောရတယ်။
အင်း... မုဒိတာလေး ပွါးပေးအုံးမှ...
အမပြောမှပဲ ဆင်ခြင်ရတော့မယ်... အလုပ်က ပြန်လာကတည်းက ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်ပြီး စာပြန်စရာရှိတာပြန် သတင်းတွေဖတ် ဘလော့လည် ဂိမ်းဆော့နဲ့... ထမင်းစားဖို့ ခေါ်ရင် စားလိုက်ပြီး ဆက်ဆော့တာ... ပြီးတော့ မောပြီး ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုပြီး အိပ်ရော...
လိုက်မယ်လေ မ… အီကြာကွေးနဲ့ လဘက်ရည်လေးလဲ သောက်ရင်းပေါ့…
ကျွန်မကတော့ အလုပ်၂ခု တပြိုင်နက်လုပ်တယ်… ဘလော့ဖတ်ရင်း စကားပြောရင်းပေါ့… တခါတလေ သားနဲ့ ကျွန်မ စကားလုပြောနေလို့သူ့ အဖေက ဘယ်သူ့ စကားနားထောင်ရမှန်းမသိဘူး… မ တို့ လိုတော့ မဖြစ်ဖူးဘူး… ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူက မချက်ဘူး မ ရဲ့… ဒီနေ့ တောင် ထိုင်စဉ်းစားနေတာ… ကွန်ပြူတာအချိန်နဲနဲလျော့ပြီး သားနဲ့ စကားပိုပြော ပိုကစားဦးမှလို့ … မ ရဲ့ ချက်ထဲက ဒီကစပြီးရှေ့ ကိုဆို ဆိုတာလေးတွေ့ ပြီး စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းတွေပြန်နားထောင်နေတာ… လက်မတွဲဖြစ်တာ ကြာပြီကော မ ရေ…
ဆင်ခြင်တွေးတောစရာတွေ အများကြီးပေးတဲ့ ပို့စ်ပါပဲ အမရေ။
ချိုသင်းတို့ကတော့ မိုးလင်း မိုးချုပ် အလုပ်အတူတူ၊ အပြင်သွားလဲ အတူတူမို့ ကိုယ် ဘလော့ဖတ်ချိန် သူ သတင်းဖတ်ချိန် လောက် စကားမပြောမိတာ။ ဒါပေမဲ့ သွားသုတ်သုတ် လာသုတ်သုတ် မို့ အတူ အေးအေးချမ်းချမ်း စကားပြောချိန်လေး ထားရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။
အမတို့နဲ့အတူ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် လိုက်ထိုင်၊ လမ်းလိုက်လျှောက်မယ်လေ ဘယ့်နှယ်လဲ။
ဟားဟားဟား .. သဘောကျတယ် အမခင်မင်းဇော်ရေ ။
အီးခေတ်ကြီးထဲ က အီးလူသားတွေ အီးဘာသာနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ စနစ်ကြီး ဖြစ်နေပြီဘဲနော် ။
ကွန်ပူတာကြီးရှေ့ မှာ ထိုင်တာကြာတော့လည်း အညောင်းမိ ၊ မျက်စိ မွဲ ဖြစ်ကုန်ကြတော့မယ် ။ အမှန်ပါဘဲ အမရေ ။အညောင်းပြေ လမ်းလျှောက်ထွက် လက်တွေ့ ဘဝက လူတွေနဲ့ စကားစမြည် ပြောကြဖို့လိုအပ်နေပါပြီ ။
လက်တွဲပြီးလျှောက်ရမဲ့သူမရှိတဲ့လူတွေ အတွက်ရော .. အကြံပေးပါအုံး ။ ဘာဆွဲပြီးလျှောက်ရ ကောင်းမလည်း လို့။ :)
ဟိဟိ... ပျော်စရာကြီး.. အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာ သိပ်ကောင်းတယ်.. ခုမှ အန်တီတို့ romantic ဆန်နေကြပါလားကွယ်ရို့..း)
အန်တီရေ ... သမီးနဲ့ ထားထားလည်း တစ်ခန်းထဲ နေပြီး အဲလို စကားပြောနေရတာ အတော်ကြာပြီ ... !!!
တယောက်နဲ့တယောက် သီးသန့်လေး အချိန်မပေးရင် ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ နီးလျက်နဲ့ ဝေးသွားနိုင်ပါတယ်။ အန်တီတို့ စုံတွဲရဲ့ ချစ်ခင်သောပုံစံလေးကို မျက်လုံးထဲမှာ မြင်ယောင်မိပါတယ် :)